Mividy T-Shirt Short Retro Vintage Retro T-Shirt Slim Fit Vehivavy - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Wood Retro Short Retro vita amin'ny tazo Retro T-Shirt ho an'ny vehivavy
$16.99 Regular vidiny $27.99
Color Black Gray maitso Pink Red White
Wood Retro Short Retro vita amin'ny akanjo lava T-Shirt Slim Fit an'ny vehivavy - Mainty / M tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Fitiavana fitafiana: Fohy
Type type: Tops
S: Bust: 68-84cm, lava: 40cm, Sleeve: 14cm, soroka: 32cm
M: Bust: 72-88 cm, Halava: 44cm, Sleeve: 15cm, soroka: 33cm
Miorina amin'ny fanavaozana 121
Kilasy fotsiny. Manafatra fanindroany aho ary haingana ny fandefasana ary tsara ny kalitao, misaotra. Fehiloha tratra 95 sm, habe fotsiny
Ry malala, naka 98
Lohahevitra tena milay)
Nila iray volana vao tonga. Fa farafaharatsiny tonga! Toy ny vokatra, mitovy amin'ny sary.